TogaHerer: WAAR YAADHAHEEN KALA QUUSANEE QOOLALA LA’AADA WARSAXAAFADEED WASAARADA ARIMAHA DIBADA SOMALILAND
WAAR YAADHAHEEN KALA QUUSANEE QOOLALA LA’AADA WARSAXAAFADEED WASAARADA ARIMAHA DIBADA SOMALILAND
Tel/Fax: 00252-225 3871. Tel: 00252 213 4495. Email: slforeign@hotmail.com.
Waxaan tixraacayaa war xalay laga siidaayey TV ga Universal soona xiigtay Wargeyska Geeska Afrika kuna soo baxay cadadkiisa 777 ee bishan Oct.4,2009 oo cambaareynaayey Ergeyga Somaliland/Somalia u qaabilsan QM Mr. Axmed Walad Cabdalla oo isticmaalay ereyga “Jamhuuriyadda Somaliland’ taaso ay u dhigeen in macnaheedu yahay kala goynta Somalia.
Waxaanu leenahay “Dadbay meeli buktaa” . waxaanu walaalahayaga Somalia u sheegaynaa ee hadalkaa yidhi in dadka reer Somaliland masiirkoodii ka tashadeen 1991 kii markii ay goboimadoodii dib ula soo noqdeen iyadoo israacii 1960 kii lagu huungoobay, dibna loogu noqoneyn.
Ninka tiisaba daryeelaa ayaa walaalkiina tiirshah . Waryaadhaheen kala quusanayee qoomama la’aada, oowalaalayaal tiina uun daryeela , farahana kala baxa Arrimaha Somaliland, Magaca Jamhuuriyadda Somalilandna dadka reer Somaliland baa la baxay ee Axmed Walad Cabdalla uma bixin.